ASSIST တွင် အမေးများသည့် မေးခွန်းများ (FAQs) - ASSIST ASEAN - အာဆီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေး ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ
1. ASSIST နှင့်ပတ်သက်သည့် အထွေထွေမေးခွန်းမျာ
1.1 ASSIST ကို သုံးခြင်းကြောင့် ပေးချေရမည့် အဖိုးအခများ ရှိပါသလား။
1.2 အဘယ်ကြောင့် ASSIST သည် အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်ပစ္စည်း ကုန်သွယ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော တိုင်ချက်များအတွက်ကိုပဲ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတာပါလဲ။ ဘယ်အချိန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများကိုပါ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလာမှာပါလဲ။
1.3 ASSIST သည် အချုပ်အနှောင်ကင်းသည်ဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်မှာ အဘယ်နည်း။
1.4 အဘယ်ကြောင့် ASSIST သည် အတိုင်ပင်ခံပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပါသနည်း။
1.5 ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ အများနှင့်ဆိုင်သော ဖိုရမ်စာမျက်နှာတွင် မည်ကဲ့သို့သော သတင်းအချက်အလက်များကို ထားရှိပါမည်နည်း။
1.6 တိုင်ချက်များသည် လျှို့ဝှက်အနေအထားဖြင့် ဆက်လက်ရှိနေမှာပါလား။ တိုင်ချက်အတွင်း တိုင်ကြားသူမှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် ပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်းနည်းကို အဆိုပြုသည့်နေရာတွင် အာဆီယံအစိုးရတစ်ရပ်မှ ပံ့ပိုးပေးသည့် အချက်အလက်များကို ဘယ်သူက ကြည့်ရှုခွင့်ရှိမှာပါလဲ။
1.7 ASSIST လုပ်ငန်းစဥ်ကြား အလဲအလှယ်ပြုလုပ်သည့် အချက်အလက်များကို နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းတရားမမှုများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာအကြပ်အတည်းဖြေရှင်းမှု( ဥပမာ WTO နှင့်/သို့မဟုတ် အာဆီယံ)များအတွင်း သုံးလို့ရနိုင်မှာပါသလား။
2. ASSIST နယ်ပယ်အတွင်း
2.1 အာဆီယံလုပ်ငန်းစုတစ်ခုမှ ၎င်းနေထိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ အစိုးရကို ပြန်၍ တိုင်ချက်ဖွင့်နိုင်ပါသလား။
2.2 အာဆီယံပြင်ပရှိ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ(ဥပမာ ဩစတြေးလျ၊ တရုတ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စသည်)၏ အစိုးရကို တိုင်တန်းချင်ပါက ASSIST ကို အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါသလား။2.3 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တရားမမှုအဖြစ် အမျိုးသားတရားရုံးများတွင် တင်ထားပြီးသားဖြစ်သည့် အရေးကိစ္စ သို့မဟုတ် လက်ရှိ ခုံသမာဓိဖွဲ့၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူနေသည့် ကိစ္စရပ် သို့မဟုတ် ၎င်း၏အစိုးရမှ WTO သို့မဟုတ် အာဆီယံအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်းဖြေရှင်းမှု ယန္တရားဖြင့် ဖြေရှင်းနေသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် တိုင်ချက်များကိုရော တိုင်တန်းလို့ရနိုင်ပါသလား။
3.1 ASSIST တွင် တိုင်ချက်မဖွင့်မီ တိုင်တန်းသူမှ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် အစိုးရဆီမှ အထောက်အပံ့သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရန် လိုအပ်ပါသလား
3.2 အကယ်၍ တိုင်တန်းသူမှ တိုင်ချက်မဖွင့်မီ သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံသဘောတူညီချက်များကို အပြည့်အဝနားမလည်လျှင်ဖြစ်စေ၊ အကြံဉာဏ်လိုအပ်လျှင်ဖြစ်စေ အကြံဉာဏ်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များရယူရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် သတင်းရင်းမြစ်တွေက ဘာများပါလဲ။
3.3. အကယ်၍ တိုင်တန်းသူသည် အသေးစား အငယ်စား သို့မဟုတ် အလတ်စား လုပ်ငန်းစု(MSME) ဖြစ်နေလျှင် ASSIST တိုင်တန်းချက်ပြုလုပ်သည့်အခါ အထောက်အပံ့ကို ရှာဖွေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ဘာပါလဲ။
3.4 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို လာရိုက်ခတ်နေသည့် ပြဿနာသည် ASSIST ၏ နယ်ပယ်အတွင်း ရှိလိမ့်မည်ဟု မည်ကဲ့သို့ သေချာစွာသိနိုင်ပါမည်လဲ။
3.5 ASSIST ထံသို့ တိုင်တန်းမှု မပြုလုပ်ခင် သက်သေခိုင်မာသည့်/အထောက်အထားခိုင်မာသည့် အမှုတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးပါသလဲ။
4.1 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် သူ/သူမ၏ ကုမ္ပဏီသည် အာဆီယံအခြေစိုက် လုပ်ငန်းစု သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းပြသရန် ကြိုတင် စာရင်းသွင်းထားဖို့လိုပါသလား သို့မဟုတ် တိုင်ချက်ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် အလိုအလျောက် စာရင်းသွင်းပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါလား။
4.2 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် သူ/သူမမှ တိုင်ချက်ဖွင့်လိုသည့် အခါတိုင်း အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ဖွင့်သည့် ဖောင်ကို ဖြည့်၍ စာရင်းသွင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါသလား သို့မဟုတ် သူ/သူမ အနေဖြင့် ဖောင်တစ်ခုတည်းနှင့် တိုင်ချက်များစွာကို ဖွင့်လို့ရနိုင်ပါသလား။
4.3 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တချို့ဗဟိုမှတ်ပုံတင်ဌာနများတွင် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
4.4 အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံမှ တစ်ခုတွင် တရားဝင်စာရင်းသွင်းထားသည့် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုတစ်ခု(ဥပမာ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း)ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ဘာပါလဲ။
4.5 အကယ်၍ တိုင်တန်းသူသည် အာဆီယံပြင်ပ နိုင်ငံတစ်ခုမှ နိုင်ငံပေါင်းစုံကော်ပိုရေးရှင်းလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု၏ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော အာဆီယံအခြေစိုက်ရုံး(ဥပမာ ရုံးခွဲ၊ ကုမ္ပဏီခွဲ၊ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး၊ စက်ရုံ၊ ဖြန့်ချိရေးစင်တာ စသည်)ဖြစ်နေပါက တိုင်တန်းသူ၏ အာဆီယံမဟုတ်သည့် နိုင်ငံရှိ ရုံးချုပ်မှနေ၍ တိုင်တန်းမှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
4.6 အာဆီယံလုပ်ငန်းစု ကိုယ်စား အတိုင်ပင်ခံ၊ ရှေ့နေ သို့မဟုတ် အကြံပေးတစ်ဦးမှ တိုင်ချက်ဖွင့်လို့ရနိုင်ပါသလား။ ရနိုင်မည်ဆိုပါက မည်သည့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားကို ပြသပေးရမှာပါလဲ။
4.7 လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းမှ ASSIST တွင် တိုင်ချက်ဖွင့်လို့ ရနိုင်ပါသလား။
4.8 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနာမည်ကို အသုံးမပြုဘဲ အမည်မသိဖြင့် တိုင်ချက်ဖွင့်လို့ရနိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ တိုင်နိုင်ပါက တိုင်လို့ရနိုင်မည့် အခြားချဥ်းကပ်မှုမှာ အဘယ်နည်း။
4.9 တိုင်တန်းသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် တိုင်တန်းသူများစွာအနေဖြင့် ဘယ်အချိန်တွင် ဘာကြောင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းမှတစ်ဆင့် တိုင်ချက်ဖွင့်ရန် စဥ်းစားသင့်ပါသနည်း။
4.10 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တိုင်ချက်ဖွင့်သည့်အခါ ဘယ်စာရွက်စာတမ်းမဆို(ဥပမာ ဥပဒေ၊ အာဏာပိုင်များနှင့် စာအဆက်အသွယ်လုပ်ထားမှုများ၊ လိုင်စင်များ၊ ဓာတ်ပုံ အထောက်အထားများ၊ ဥပဒေ မှတ်တမ်းများ၊ စသည်)ကို အပ်လုပ်တင်နိုင်ပါသလား။
4.11 ASSIT ဝက်ဘ်ဆိုဒ်(ဥပမာ အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ဖောင်)ပေါ်တွင် တိုင်ချက်မူကြမ်းကို နောက်ပိုင်းတွင် အပြီးသတ်ရန်အတွက် သိမ်းထားလို့ ရနိုင်ပါသလား။
4.12 အကယ်၍ တူညီသည့်ကုန်သွယ်မှုပြဿနာများကို နိုင်ငံများစွာ၌ ကြုံတွေ့နေရပါက တိုင်ချက်တစ်စောင်တည်းဖြင့် အာဆီယံအဖွဲဝင်နိုင်ငံများစွာကို တိုင်ချက်ဖွင့်လို့ရနိုင်ပါသလား။
4.13 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တိုင်ချက်မိတ္တုကို ASSIST အောက်ရှိ အခြားသက်ဆိုင်သူများထံ မေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါသလား။4.14 တိုင်ချက်ကို အင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်သည့် ဘာသာစကားဖြင့် တိုင်၍ ရနိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ မရပါက ဖြစ်ရပ်မှန်ပြသည့် တရားဝင်အချက်အလက်အချို့(ဥပမာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားမှု အထောက်အထား သို့မဟုတ် အမျိုးသားဥပဒေ မိတ္တု)ကို တိုင်တန်းသူ၏ ဘာသာစကား သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုပြဿနာ ဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံ၏ ဘာသာစကားဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသလား။
5. တိုင်ချက် တင်ပြီးသည့်အချိန်
5.1 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ခြေရာခံ အိုင်ဒီနံပါတ် နှင့် သို့မဟုတ် တိုင်ချက်တင်ခဲ့သည့် အီးမေးလ်ကို ပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် မေ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ခဲ့ပါက ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။
5.2 တိုင်ချက်ကို ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူ(CA) သို့မဟုတ် သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးက ပယ်ချခဲ့လျှင် ဘာဆက်ဖြစ်မှာပါသလဲ။
5.3 ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူ သို့မဟုတ် သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့် တိုင်ကြားသူ(အာဆီယံ လုပ်ငန်းစု)ထံမှ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ထပ်တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသလား။
5.4 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးသည့်နောက် ထပ်တိုးအချက်အလက်များကို မိမိဆန္ဒအလျှောက်ပေးပို့နိုင်ပါသလား။ ပေးပို့နိုင်ပါက မည်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် လုပ်ရမည်နည်း။
5.5 တိုင်တန်းသူမှ တိုင်ချက်ကို တင်ပြီးသည်နှင့် ချက်ချင်း ပြန်ရုတ်သိမ်းလို့ရပါသလား။ ရလျှင် မည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် လုပ်ရမည်နည်း။
5.6 အာဆီယံ လုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိ အာဏာပိုင်များထံ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ရပါသလား။
5.7 သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အများဆုံး ရက်၂၀ အပြီး အချိန်ထပ်တိုးပေးဖို့ ဘယ်နှစ်ခါ တောင်းဆိုနိုင်ပါသလဲ။5.8 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တိုင်ချက်ကို သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်က လက်ခံပြီးသည့်ရက်မှ စတင်၍ အလုပ်လုပ်ရက် ၃၀ မှ ၅၀ (ဥပမာ ပြက္ခဒိန် သီတင်းပတ် ၆ - ၁၀ ပတ်)အတွင်း ASSIST ထံမှ အဖြေ ပြန်လည်မကြားရပါက တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။
6. ဖြေရှင်းချက်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
6.1 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ဖြေရှင်းနည်းကို မရခဲ့ပါက ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။
6.2 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ဖြေရှင်းနည်းကို ကျေနပ်မှုမရှိခဲ့ပါက ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။
6.3 တိုင်တန်းသူမှ ဖြေရှင်းနည်းမရခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ ဖြေရှင်းနည်းကို ကျေနပ်ခြင်းမရှိလျှင်ဖြစ်စေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးရန် အယူခံဝင်နိုင်ပါသလား။
6.4 တိုင်တန်းသူမှ ဖြေရှင်းနည်းမရခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ ဖြေရှင်းနည်းကို ကျေနပ်ခြင်းမရှိလျှင်ဖြစ်စေ တူညီသည့် တိုင်ချက်ကိုပဲ ထပ်မံဖွင့်လို့ ရနိုင်ပါသလား။
1. ASSIST နှင့်ပတ်သက်သည့် အထွေထွေမေးခွန်းများ
မရှိပါ။ ASSIST ကို ဘာပေးချေမှုမှ မလုပ်ရဘဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဖိုးအခများ၊ ဝန်ဆောင်ခများနှင့် မှတ်ပုံတင်ခ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာတင်ခများ လုံးဝမရှိပါ။
ASSIST ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှ စတင်၍ ကုန်ပစ္စည်းများကုန်သွယ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရေးကိစ္စများအတွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီး အာဆီယံဒေသအတွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရေးကိစ္စများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်ကတည်းက သုံးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ တွင် ASSIST ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများအတွက်ပါ တိုးချဲ့ဖြေရှင်းပေးလာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။
အချုပ်အနှောင်ကင်းသည်ဆိုသည်မှာ တိုင်ချက်ကို ASSIST စနစ်သို့ တင်ပြလာသည့်အခါ တိုင်ချက်ကို လက်ခံမလား ဖြေရှင်းချက်ကို ကမ်းလှမ်းမလားဆိုသည်ကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှသာ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ASSIST မှ ဝင်ရောက်ချုပ်နှောင်ခြင်းမပြုသော်လည်း အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် တိုင်ချက်ကို အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်၍ ဖြေရှင်းပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ASSIST သည် အမျိုးသားအဆင့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်အဆင့် တရားရုံးမျိုးတွင် ဖြေရှင်းပေးသည့် တရားရေးစနစ်တစ်ခုမဟုတ်သလို ယင်းစနစ်ကို စီမံခန့်ခွဲ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနေသူများမှာလည်း လွတ်လပ်သော တရားသူကြီး၊ ခုံသမာဓိ၊ ကြားဝင်စေ့စပ်သူ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်လူကြီးများ မဟုတ်ကြပါ။ ASSIST ဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းမှ တစ်ဆင့် အာဆီယံအခြေစိုက် လုပ်ငန်းစုများ(ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု အဖွဲ့အစည်းများ/ကုန်သည်ကြီးများအသင်း)နှင့် အာဆီယံအစိုးရအာဏာပိုင်များကြား အွန်လိုင်းမှနေ၍ တိုက်ရိုက်အကြံပေးဆောင်ရွက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အာဆီယံဒေသအတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေစဉ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေနေသည့် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုများအတွက် အသုံးတည့်နိုင်သော အချက်အလက်များကို အများနှင့်ဆိုင်သော ဖိုရမ်စာမျက်နှာတွင် အခါအားလျော်စွာ ဖော်ပြပေးပါသည်။ ယင်းအချက်အလက်များတွင် အောင်မြင်မှုဘဝဇာတ်ကြောင်းများ၊ သာဓကဖြစ်ရပ်များနှင့် အာဆီယံသဘောတူညီချက်များအကြောင်း ပိုမိုနားလည်လာနိုင်စေမည့် လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဖိုရမ်တွင် လုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများနှင့် အာဆီယံအတွင်း ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေရန်အတွက် အသုံးဝင်မည့် သင်ခန်းစာများကို မျှဝေပေးရန်လည်း တိုက်တွန်ပါလိမ့်မည်။ ဖိုရမ်ပေါ်တွင် လျှို့ဝှက်မဟုတ်သည့် အချက်အလက်များကိုသာ တင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
လျှို့ဝှက်ဖြစ်မှုသည် အလုံးစုံအရေးပါသည့် ကိစ္စဖြစ်ပြီး တိုင်တန်းသူများ၊ တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အာဆီယံ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတို့သာလျှင် တိုင်ချက်အစစ်အမှန်နှင့် အဆိုပြုသည့် ဖြေရှင်းနည်းကို သိပိုင်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ကျေးဇူးပြု၍ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ တာဝန်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မသက်ဆိုင်သော ရှင်းလင်းချက်ကို ဖတ်ရှုပေးပါ)။
1.7 ASSIST လုပ်ငန်းစဥ်ကြား အလဲအလှယ်ပြုလုပ်သည့် အချက်အလက်များကို နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းတရားမမှုများ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာအကြပ်အတည်းဖြေရှင်းမှု( ဥပမာ WTO နှင့်/သို့မဟုတ် အာဆီယံ)များအတွင်း သုံးလို့ရနိုင်မှာပါသလား။မရပါ။ ASSIST ၏ မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် (ကျေးဇူးပြု၍ ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာ အားလုံး၏ အောက်ခြေရှိ လင့်ခ်ကို ဝင်ကြည့်ပေးပါ) က ရှင်းပါသည်။ ASSIST လုပ်ငန်းစဥ်အတွင်း တိုင်တန်းသူ သို့မဟုတ် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် မည်သည့် ထွက်ဆိုချက်များ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကိုမှ အမျိုးသားအဆင့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာအဆင့် တရားရေးရာကိစ္စရပ်များတွင် သုံးခွင့်မရှိပါ။ ဥပဒေရေးရာ တရားရုံးများတွင် အမိန့်နှင့် သုံးခွင့်မရှိသော်လည်း အဆိုပြုပေးသော အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ (ဥပမာ အကောက်ခွန်အရာရှိများ၊ ကုန်သွယ်ရေးအရာရှိများ၊ ပို့ကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာဏာပိုင်များ၊ လိုက်လျောညီညွတ်မှုရှိမရှိ ဆန်းစစ်သည့်အဖွဲ့များ စသည်) တို့အတွက် ယင်းကဲ့သို့တိုင်ချက်နှင့် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ တူညီသည့် ကိစ္စရပ်များအတွင်း အဆိုပြုပေးသည့် ဖြေရှင်းနည်းများသည် သတ်မှတ်တန်ဖိုးများ ရှိပါသည်။
မရပါ။ ASSIST သည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုတစ်ခုနှင့် အခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၉ နိုင်ငံအတွင်းမှ တစ်နိုင်ငံ၏ အစိုးရကြား အာဆီယံဒေသတွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေး အရေးကိစ္စများအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်တန်းသည့် လုပ်ငန်းစု၏ အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်သော ပြည်တွင်းအရေးကိစ္စများကို ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်ကြား၍မရနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (က)တွင် အခြေစိုက်ပြီး ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (ခ)တွင် ပေးသည်ဆိုပါစို့။ ယင်းလုပ်ငန်းမှ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (ခ)ကို တိုင်တန်းချင်သည့်အခါတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (က)၌ ရှိနေမည့် ပင်မကုမ္ပဏီက ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်ချက်ဖွင့်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယင်းဖြစ်ရပ်ကို အမည်မသိအဖြစ်နှင့် အာဆီယံအခြေစိုက် ကုန်သွယ်မှု အဖွဲ့အစည်း၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့နှင့် အသိအမှတ်ပြုရှေ့နေ သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြု ဥပဒေရုံးများမှ တိုင်တန်းသူကိုယ်စား တိုင်ကြားပေးနိုင်ပါသည်။
2.2 အာဆီယံပြင်ပရှိ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ(ဥပမာ ဩစတြေးလျ၊ တရုတ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စသည်)၏ အစိုးရကို တိုင်တန်းချင်ပါက ASSIST ကို အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါသလား။
မရပါ။ ASSIST သည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံ လုပ်ငန်းစုတစ်ခုနှင့် အခြား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၉ နိုင်ငံအတွင်းရှိ တစ်နိုင်ငံ၏ အစိုးရကြား အာဆီယံဒေသတွင်း နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေး အရေးကိစ္စများအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
2.3 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တရားမမှုအဖြစ် အမျိုးသားတရားရုံးများတွင် တင်ထားပြီးသားဖြစ်သည့် အရေးကိစ္စ သို့မဟုတ် လက်ရှိ ခုံသမာဓိဖွဲ့၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ခံယူနေသည့် ကိစ္စရပ် သို့မဟုတ် ၎င်း၏အစိုးရမှ WTO သို့မဟုတ် အာဆီယံအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်းဖြေရှင်းမှု ယန္တရားဖြင့် ဖြေရှင်းနေသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် တိုင်ချက်များကိုရော တိုင်တန်းလို့ရနိုင်ပါသလား။
မရပါ။ အကယ်၍ ယင်းသို့အခြေအနေမျိုးများဖြင့် တိုင်တန်းသူမှ တိုင်ကြားခဲ့ပါက အာဆီယံအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ် သွားမည့်နိုင်ငံမှ တိုင်ချက်ကို မမှန်ကန်ဟုဆိုကာ ပယ်ချပစ်နိုင်ပါသည်။
3.1 ASSIST တွင် တိုင်ချက်မဖွင့်မီ တိုင်တန်းသူမှ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် အစိုးရဆီမှ အထောက်အပံ့သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရန် လိုအပ်ပါသလား။
ဟင့်အင်း မလိုအပ်ပါ။ ASSIST ကို အာဆီယံလုပ်ငန်းစုများမှ တိုက်ရိုက်သုံးစွဲလို့ရနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့အခြေစိုက်နေရာမှ အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းခံနေစရာ မလိုအပ်ပါ။ ယင်းသို့ ဆိုထားသော်ငြား တိုင်တန်းမည့်သူများအနေဖြင့် ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်တန်းမှုမပြုလုပ်ခင် ၎င်းတို့အစိုးရထံမှ ထင်မြင်ချက်နှင့် ရနိုင်မည့် အထောက်အပံ့တို့ကို တောင်းခံကြည့်ရန် တိုက်တွန်းပါသည်။
တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်တန်းမှုမပြုလုပ်ခင် ၎င်းတို့ အခြေစိုက်နေရာမှ အစိုးရ၏ ထင်မြင်ချက်များနှင့် ရနိုင်မည့်အထောက်အပံ့တို့ကို တောင်းခံကြည့်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လွတ်လပ်သော အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေရုံးများ၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီများ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းများထံမှပါ အကူအညီနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ တိုင်တန်းသူများသည် အာဆီယံ အရေးကိစ္စများကို နားလည်နိုင်ရန် နည်းပညာပိုင်းအရ လိုအပ်ချက်များရှိနေသော သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် ခက်ခဲနေသော လုပ်ငန်းစုများ ဖြစ်နေပါက ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကူအညီနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ရယူရန် အလေးထား အကြံပြုလိုပါသည်။
လွတ်လပ်သော အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေရုံးများ၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီများ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းများထံမှပါ အကူအညီနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ASSIST မှတစ်ဆင့် တိုင်တန်းမှုမပြုလုပ်ခင် ၎င်းတို့ အခြေစိုက်နေရာမှ အစိုးရ၏ ထင်မြင်ချက်များနှင့် ရနိုင်မည့်အထောက်အပံ့တို့ကို တောင်းခံကြည့်နိုင်ပါသည်။
ASSIST ၏ နယ်ပယ်ကို ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်ပြပေးထားပါသည်။ တိုင်ချက်သည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အမျိုးအစားများအတွင်း ပါဝင်နေပါက ပယ်ချခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်အာဆီယံကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်နှင့်မှ စည်းကမ်းထိန်းပေးထားခြင်း၊ ပတ်သက်နေခြင်းမရှိလျှင်၊
အာဆီယံဒေသတွင်း ကုန်သွယ်မှုထက် ကျော်လွန်နေလျှင်၊
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွင်းရှိ အငြင်းပွားမှုသက်သက်သာ ဖြစ်နေလျှင်၊
လုံလောက်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်အလက်များမှ ထောက်ပံ့ပေးထားမှုမရှိလျှင်၊
အခြားဥပဒေရေးရာ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် တရားရေးသုံးသပ်မှုများ သို့မဟုတ် တရားတဘောင်များနှင့် သက်ဆိုင်နေသည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်နေလျှင်၊
ASSIST ၏ အောက်တွင် လက်ရှိမရနိုင်သေးသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရေးကိစ္စများကို တိုင်ကြားလာခဲ့လျှင်။
ထို့ကြောင့် တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အခြေခံအချက်အလက်များကို သေချာစွာ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ အခြေစိုက်နိုင်ငံအစိုးရသို့မဟုတ် လွတ်လပ်သော အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေရုံးများ၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီများ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းများထံမှ လမ်းညွှန်ချက်နှင့် အကူအညီများ ရယူခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
တိုင်တန်းချက်ကို ASSIST တွင်ပါဝင်နေသည့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ ဆန်းစစ်ကြမည် ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းသို့တည်ဆောက်ရန် အရမ်းအရေးကြီးပါသည်။ စိန်ခေါ်မှုခံနေရသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သို့မဟုတ် စီမံချက်၊ သို့မဟုတ် တိုင်တန်းသူ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြဿနာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်လည်း အလေးထားတိုက်တွန်းပါသည်။ တိုင်တန်းသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းစဥ်ကို လွယ်ကူချောမောစေမည့် အလားအလာရှိသော ဖြေရှင်းချက်များကိုပါ တင်ပြရန် စဥ်းစားနိုင်ပါသည်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြထားသည့် တိုင်ချက်များကို သွားမည့်နိုင်ငံမှ ပြဿနာအဖြေရှာပေးနိုင်ဖို့ လက်ခံပေးနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းမှာ ပိုမြင့်ပါသည်။
4.1 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် သူ/သူမ၏ ကုမ္ပဏီသည် အာဆီယံအခြေစိုက် လုပ်ငန်းစု သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်းပြသရန် ကြိုတင် စာရင်းသွင်းထားဖို့လိုပါသလား သို့မဟုတ် တိုင်ချက်ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် အလိုအလျောက် စာရင်းသွင်းပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါလား။
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ။ တိုင်တန်းသူမှ ၎င်း၏ အမျိုးသားလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားမှု အထောက်အထားကို ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ တိုင်ချက်ဖောင်တွင် မဖြစ်မနေထည့်သွင်းပေးရမည့် အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အမှုသည်များကိုယ်စား(အမည်မသိတိုင်ချက်များတွင်) တိုင်ချက်ဖွင့်သည့် ရှေ့နေများ ဥပဒေလုပ်ငန်းအဖွဲ့ များသည် ဦးစွာ အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံတွင် စာရင်းသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အာဆီယံအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးထံမှ လျှို့ဝှက်သည့်ဖြစ်ရပ်ကုဒ်ကို ရရှိရန် ရည်မှန်းထားသည့်ဖောင်ကို တင်ပေးရပါမည်။
တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် လုပ်ငန်းစု(သို့မဟုတ် အမည်မသိ တိုင်ချက်များတွင် ကိုယ်စားပြုသည့်အဖွဲ့)မှ တိုင်ချက်အသစ်တစ်ခု ဖွင့်သည့်အကြိမ်တိုင်း အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ဖောင်၌ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမည့် နယ်ပယ်များအားလုံး ဖြည့်သွင်းပြီး တိုင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
မလိုအပ်ပါ။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်ဌာနလည်းမရှိပါ။ အမှုသည်များကိုယ်စား (အမည်မသိတိုင်ချက်များတွင်) တိုင်ချက်ဖွင့်ပေးသည့် ရှေ့နေများနှင့် ‌ဥပဒေလုပ်ငန်းအဖွဲ့များသာလျှင် အရင်ဆုံး အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးထံ စာရင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အာဆီယံအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးထံမှ လျှို့ဝှက်သည့်ဖြစ်ရပ်ကုဒ်ကို ရရှိရန် ရည်မှန်းထားသည့်ဖောင်ကို တင်ပေးရပါမည်။
ယင်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အာဆီယံလုပ်ငန်းစုသည် ၎င်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့် နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအတိုင်း ဝတ္တရားမပျက်နေထိုင်ပြီး စီးပွားရေး သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း/ကုန်သည်ကြီးများအသင်း/စီးပွားရေးကောင်စီ/စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် စာရင်းသွင်းထားခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ယင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံနိုင်ငံအတွင်းရှိ လက်ရှိပြဌာန်းထားသော ဥပဒေအတိုင်း စာရင်းသွင်းထားခြင်း ဖြစ်ရပါမည်။ ယင်းသတ်မှတ်ချက်သည် အမှုသည်များကိုယ်စား တိုင်ချက်ဖွင့်မည့် ရှေ့နေများ သို့မဟုတ် ဥပဒေ အဖွဲ့များအတွက်လည်း အကြုံးဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံတရားစီရင်နယ်အတွင်း ဥပ‌ဒေကို ကျင့်သုံးရန် သက်မွေးမှုလိုင်စင်ရှိကြောင်း အထောက်အထားပြရန် လိုအပ်ပါသည်။
မရပါ။ တိုင်တန်းချက်ကို အာဆီယံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းစုကသာ တင်ရပါမည်။ သို့သော် ရုံးချုပ်အနေဖြင့် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုမှ တိုင်ချက်ကို တင်သည့်အချိန်တွင် အကြံဉာဏ်သို့မဟုတ် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများ ပေးနိုင်ပါသည်။
4.6 အာဆီယံလုပ်ငန်းစု ကိုယ်စား အတိုင်ပင်ခံ၊ ရှေ့နေ သို့မဟုတ် အကြံပေးတစ်ဦးမှ တိုင်ချက်ဖွင့်လို့ရနိုင်ပါသလား။ ရနိုင်မည်ဆိုပါက မည်သည့် လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားကို ပြသပေးရမှာပါလဲ။
ရနိုင်ပါသည်။ တိုင်တန်းချက်ကို အာဆီယံလုပ်ငန်းစုကိုယ်စား အတိုင်ပင်ခံ ရှေ့နေ သို့မဟုတ် အကြံပေးတစ်ဦးမှ တိုင်ချက်ဖွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ယင်းသို့ဖြစ်ပါက အာဆီယံလုပ်ငန်းစု(AE)၏ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားကို ပေးရမည်သာဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တိုင်တန်းချက်သည် အာဆီယံလုပ်ငန်းစု၏ တိုင်တန်းချက်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်တန်းသူသည် တိုင်တန်းမှုပြုလုပ်နေစဥ်တွင် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးခြင်းမရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ်အဖွဲ့များ၏ အကြံပြုချက်နှင့် အကူအညီများ ရယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော် တိုင်တန်းချက်ကို အမည်မသိတိုင်တန်းချက်အဖြစ် တိုင်ခဲ့ပါက လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ် (ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီများ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ စသည်တို့အတွက်) နှင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင် အထောက်အထား(ရှေ့နေများနှင့် ဥပဒေအဖွဲ့များအတွက်)တို့သည် အာဆီယံလုပ်ငန်းစု၏ အရာများမဟုတ်ဘဲ အာဆီယံလုပ်ငန်းစုကိုယ်စား တိုင်ချက်တင်သွင်းသည့် အဖွဲ့အစည်း၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင် အထောက်အထားများ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
4.7 လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းမှ ASSIST တွင် တိုင်ချက်ဖွင့်လို့ ရနိုင်ပါသလား။
မရပါ။ လက်ရှိအချိန်တွင် ASSIST ကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ ဥပ‌ဒေရေးရာလုပ်ငန်းများ) အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအတွက် (ဥပမာ သာမန်လူများ) မရသေးပါ။ သို့သော် အခြားလိုအပ်ချက်အားလုံး ပြည့်မီနေမည်ဆိုပါက ရှေ့နေတစ်ဦးတည်းမှ သူ/သူမ၏ အမှုသည်(ဥပမာ အာဆီယံအခြေစိုက် လုပ်ငန်းစု)ကိုယ်စား အမည်မသိတိုင်ချက်ကို တိုင်ကြားပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
4.8 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီနာမည်ကို အသုံးမပြုဘဲ အမည်မသိဖြင့် တိုင်ချက်ဖွင့်လို့ရနိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ တိုင်နိုင်ပါက တိုင်လို့ရနိုင်မည့် အခြားချဉ်းကပ်မှုမှာ အဘယ်နည်း။
ရပါသည်။ တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ဆန္ဒရှိပါက အမည်မသိတိုင်ချက်ကို မည်သည့်အကြောင်းရင်းအတွက်မဆို တိုင်ကြားနိုင်ပြီး ၎င်းမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံနှင့်/သို့မဟုတ် သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထံ မဖော်ပြဘဲ ထားလို့ရပါသည်။ ယင်းသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် တိုင်တန်းသူသည် ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် တူညီသော ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့အစည်း(ဥပမာ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ရှေ့နေသို့မဟုတ် ဥပဒေလုပ်ငန်းအဖွဲ့)တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းကိုယ်စား တိုင်ကြားခိုင်းနိုင်ပါသည်။ အာဆီယံအခြေစိုက် ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့ကိုယ်စား တိုင်ချက်ဖွင့်ပေးရသည့် သက်ဆိုင်ရာ အာဆီယံလုပ်ငန်းစု၏ နာမည်ကို ညွှန်းဖော်ပြပေးစရာ မလိုအပ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ်(ဥပမာ ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့် အာဆီယံတရားစီရင်နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင် နံပါတ် သို့မဟုတ် ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေလုပ်ငန်းအဖွဲ့များအတွက် ဥပဒေလိုင်စင်)ကိုသုံးပြီး ရိုးရှင်းစွာ တိုင်ချက်ဖွင့်နိုင် ပါသည်။ ရှေ့နေများနှင့် ‌ဥပဒေရုံးအဖွဲ့များသည် အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံ ကြိုတင်စာရင်းပေးရန် လိုအပ်ပြီး အမည်မသိတိုင်တန်းချက် တိုင်ကြားသည့်အခါ အသုံးပြုရန်အတွက် လျှို့ဝှက်သည့်ဖြစ်ရပ်ကုတ်ကို ရယူရန် သက်ဆိုင်သည့်ဖောင်ကို ဖြည့်ပေးရပါမည်။ ဒီနည်းလမ်းသည် တူညီသည့် ကုန်သွယ်မှုပြဿနာများရှိနေသည့် တိုင်တန်းသူများစွာမှ တိုင်ချက်များစွာ တိုင်တန်းနေရသည့်အဖြစ်ကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ မှတ်ထားရန်လိုအပ်သည်မှာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များမှ အမည်မသိဖြင့်တိုင်ကြားလိုသည့် အာဆီယံလုပ်ငန််းစုများထံ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အခါ ဝန်ဆောင်ခများပေးရန် လိုအပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
4.9 တိုင်တန်းသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် တိုင်တန်းသူများစွာအနေဖြင့် ဘယ်အချိန်တွင် ဘာကြောင့် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တစ်ဆင့် တိုင်ချက်ဖွင့်ရန် စဥ်းစားသင့်ပါသနည်း။
အကယ်၍ ကုမ္ပဏီများစွာသည် တူညီသည့် ကုန်သွယ်မှုပြဿနာများ သို့မဟုတ် အရေးကိစ္စများ ရှိနေပြီး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားပြုစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း (ဥပမာ ကုန်သွယ်မှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ စီးပွားရေးကောင်စီ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း စသည်) ကိုသုံး၍ ၎င်းတို့ကိုယ်စား အဖြေရှာပေးရန် တိုင်ချက်ဖွင့်လိုသည့်အခါ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပါသည်။ အခြားအခြေအနေတစ်ခုမှာ အရေးကိစ္စ၏ အကဲဆတ်မှုကြောင့် လုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် ၎င်းတို့ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် မပြောလိုသည့်အခါ ၎င်းကိုယ်စား ၎င်း၏ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကို တိုင်ချက်ဖွင့်ခိုင်းလိုသည့် အခါမျိုးတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် အချိန်ကိုက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အာဆီယံအခြေစိုက် လိုင်စင်ရပြီး ရှေ့နေများ၊ ‌ဥပဒေရုံးများကို အသုံးပြု နိုင်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးထံမှ စာရင်းသွင်းဖို့လိုအပ်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လည်း လိုပါသည်။
ရပါသည်။ ASSIST အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ဖောင်တွင် ညွှန်းဆိုထားသည့် တွဲဖက်စာရွက်စာတမ်းများအတွက် Mb ပမာဏအတွင်း ရှိနေသေးသမျှ ကြိုက်သည့်ပုံစံကို တင်လို့ရပါသည်။ တချို့ချွင်းချက်ကိစ္စတွေမှာတော့ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူထံ ထပ်တိုး အချက်အလက်များအား အီးမေးလ်ဖြင့် ပို့ပေးဖို့ တိုင်တန်းသူကိုပန်ကြားတာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပါသည်။
4.11 ASSIT ဝက်ဘ်ဆိုဒ်(ဥပမာ အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ဖောင်) ပေါ်တွင် တိုင်ချက်မူကြမ်းကို နောက်ပိုင်းတွင် အပြီးသတ်ရန်အတွက် သိမ်းထားလို့ ရနိုင်ပါသလား။
မရပါဘူး။ တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တိုင်ချက်ကို အွန်လိုင်းပြင်ပမှာ ပြင်ဆင်ထားသင့်ပြီး တိုင်ချက်တင်သည့်အချိန်တွင် အွန်လိုင်းတိုင်ချက်ဖောင်၌ အချက်အလက်များကို မိတ္တုပွားထည့်ပေးသင့်ပါသည်။
မရပါဘူး။ တိုင်ချက်တစ်ခုချင်းစီသည် တစ်ကြိမ်လျှင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုသာ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ တူညီသည့် ပြဿနာတစ်ခုတည်းကို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထက်ပိုသည့်နေရာများတွင် ကြုံတွေ့နေရလျှင် တိုင်တန်းသူသည် တိုင်ချက်များစွာကို တင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
4.13 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တိုင်ချက်မိတ္တုကို ASSIST အောက်ရှိ အခြားသက်ဆိုင်သူများထံ မေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
မလိုပါဘူး။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု အားလုံးသည် ASSIST ပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းမှသာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
4.14 တိုင်ချက်ကို အင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်သည့် ဘာသာစကားဖြင့် တိုင်၍ ရနိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ မရပါက ဖြစ်ရပ်မှန်ပြသည့် တရားဝင်အချက်အလက်အချို့(ဥပမာ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားမှု အထောက်အထား သို့မဟုတ် အမျိုးသားဥပဒေ မိတ္တု)ကို တိုင်တန်းသူ၏ ဘာသာစကား သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုပြဿနာ ဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံ၏ ဘာသာစကားဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသလား။အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် စနစ်အတွင်းရှိ တရားဝင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမည့် ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး တိုင်တန်းသူသည် အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ရေးသားပေးရပါမည်။ တိုင်တန်းသူမှ တွဲတင်ပေးသည့် အထောက်အထား စာရွက်အားလုံးမှာလည်း (ဥပမာ အမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ နည်းစနစ်ပိုင်း အစီရင်ခံစာများ စသည်) အင်္ဂလိပ်လိုသာ ရေးရပါမည်။ သို့သော် မှတ်ပုံတင် အထောက်အထား၊ အမျိုးသားဥပဒေများ၊ အသိအမှတ်ပြုစာရွက်များ၊ လိုင်စင်သို့မဟုတ် တူညီသည့်စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်ရုံးသုံးစာဖြင့် ရေးသားထားသည့် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုမူ တိုင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အနေဖြင့် စနစ်အတွင်း အပ်လုဒ်တင်ပေးလို့ရပါသည်။ သို့သော် ယင်းစာရွက်စာတမ်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပါ တစ်ပါတည်း ပါဖို့လိုပါသည်။ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ဖြေရှင်းနည်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်တန်းသူသည် ASSIST တွင် ဖော်ပြထားသည့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူး၏ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထံ ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။
5.2 တိုင်ချက်ကို ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူ(CA) သို့မဟုတ် သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးက ပယ်ချခဲ့လျှင် ဘာဆက်ဖြစ်မှာပါသလဲ။
တိုင်ချက်တစ်ခု ငြင်းပယ်ခံလိုက်ရလျှင် ယင်းသက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်သည် နည်းစနစ်အပိုင်းအရ အပြီးသတ်သွားပြီဖြစ်ပြီး တိုင်ချက်ကိုပါ ဖယ်ရှားလိုက်မည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ၎င်း၏တိုင်ချက်တွင် ထပ်တိုးအချက်အလက် သို့မဟုတ် အချက်အလက်အသစ်များ ပံ့ပိုးပေးပြီး ASSIST ၏ အောက်မှ တိုင်ချက်အသစ်တိုင်တန်းခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းကိစ္စရပ်အား အခြားအကြပ်အတည်းဖြေရှင်းသည့် ယန္တရားများထံ တင်ပြခြင်းကဲ့သို သင့်တော်သည့်အဖြေရှာနိုင်မည့် အခြားနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။( “ဖြေရှင်းနည်းပံ့ပိုးပေးပြီးသည့်အခါ” ကဏ္ဍအောက်ရှိ ပံ့ပိုးပေးထားသော အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုပါ။)
သူတို့တွင် ထပ်တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူအနေဖြင့် ASSIST စနစ်ရှိ မပြီးပြည့်စုံလျှင်လုပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံး၍ တိုင်ချက်ကို လုပ်ငန်းစုထံ ပြန်လည်ပေးပို့ပြီး နောက်ထပ် အချက်အလက်များကို တောင်းခံနိုင်ပါသည်။ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုထံမှ ထပ်တိုးအချက်အလက်များကို ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူကတစ်ဆင့်သာ တောင်းခံနိုင်ပြီး ယင်းကိုလည်း offline (ဥပမာ အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုများ)အနေဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အာဆီယံလုပ်ငန်းစုထံ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်၍ မရနိုင်ပါ။
မရပါ။ တိုင်တန်းချက်ကို ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူ သို့မဟုတ် သွားမည့်နိုင်ငံမှ လက်ခံခြင်း၊ ပယ်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် တိုင်တန်းသူသည် ထပ်တိုးအချက်အလက်များကို ပေးပို့၍မရတော့ပါ။ ယင်းသို့ ထပ်မံပေးပို့လိုပါက တိုင်တန်းသူသည် တိုင်ချက်ကို ရုတ်သိမ်းပြီး ထပ်တိုးအချက်အလက်များဖြင့် တိုင်ချက်အသစ် ထပ်တိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရပါသည်။ တိုင်တန်းချက်ကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဥ်အချိန်မရွေး တိုင်တန်းသူမှသာလျှင် ရုတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ရန်အတွက် တိုင်တန်းသူသည် ASSIST ဒက်ရှ်ဘုတ်ထဲ လော့ဂ်အင်ဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်ချက်ကို ဖွင့်ကာ ရုတ်သိမ်းရန် လုပ်ဆောင်ချက်ကို နှိပ်ပေးရပါမည်။ ASSIST အောက်ရှိ သက်ဆိုင်သည့် ပတ်သက်သူအားလုံးကို ရုတ်သိမ်းသည့်အကြောင်း ASSIST စနစ်မှ အလိုအလျောက် အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မဆက်သွယ်ရပါ။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မည်သည့်အဆင့်မှာမှ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမျိုးမရှိပါ။
5.7 သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အများဆုံး ရက်၂၀ အပြီး အချိန်ထပ်တိုးပေးဖို့ ဘယ်နှစ်ခါ တောင်းဆိုနိုင်ပါသလဲ။
အွန်လိုင်းကို အသုံးပြု၍ တစ်ကြိမ်သာ တောင်းနိုင်ပါသည််။
5.8 တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် တိုင်ချက်ကို သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်က လက်ခံပြီးသည့်ရက်မှ စတင်၍ အလုပ်လုပ်ရက် ၃၀ မှ ၅၀ (ဥပမာ ပြက္ခဒိန် သီတင်းပတ် ၆ - ၁၀ ပတ်)အတွင်း ASSIST ထံမှ အဖြေ ပြန်လည်မကြားရပါက တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ။
ယင်းသို့ဖြစ်ခဲ့ပါက တိုင်တန်းသူသည် ASSIST ၏ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူထံ အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် (အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ ASSIST ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ်ကို ASSIST ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြည့်ပါ) ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၏ နောက်ဆုံး အခြေအနေကို စုံစမ်းခြင်းဖြစ်စေ၊ ၎င်းနေထိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ အိမ်ရှင်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထံ ဆက်သွယ်၍ အဘယ်ကြောင့် အချိန်နောက်ကျနေသလဲဆိုသည်ကို ၎င်းကိုယ်စား သွားမည့်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ထံ မေးပေးဖို့ ပန်ကြားခြင်းဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ယင်းသို့ဖြစ်ခဲ့ပါက တိုင်တန်းသူသည် ASSIST ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူထံ အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု၏ နောက်ဆုံး အခြေအနေကို စုံစမ်းခြင်းဖြစ်စေ၊ ၎င်းနေထိုင်ရာ နိုင်ငံရှိ အိမ်ရှင်နိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထံ ဆက်သွယ်၍ လုပ်ငန်းအဆင်ပြေအောင် ပန်ကြားခိုင်းတာဖြစ်စေ လုပ်နိုင်ပါသည်။ တိုင်တန်းသူသည် အကြပ်အတည်း ဖြေရှင်းရေးယန္တရားများ(ဥပမာ ၎င်းနေထိုင်ရာ အစိုးရ သို့မဟုတ် သွားမည့်နိုင်ငံ၏ အမျိုသားတရားစီရင်ရေး သို့မဟုတ် ခုံသမာဓိများမှ တစ်ဆင့် အကြပ်အတည်း ဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာ အာဆီယံတိုးမြှင့်ယန္တရားများသုံးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ၎င်းအခြေစိုက်ရာနိုင်ငံအစိုးရအား WTO အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့် သွားမည့်နိုင်ငံကို ရင်ဆိုင်စေပြီး WTO အကြပ်အတည်းဖြေရှင်းမှု ယန္တရားများကို သုံးခြင်း)အပါအဝင် တခြားရွေးချယ်စရာများကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ယင်းသို့ဖြစ်ခဲ့ပါက တိုင်တန်းသူသည် မှန်ကန်သည့် ထပ်တိုးအချက်အလက် သို့မဟုတ် အချက်အလက်အသစ်များဖြင့် ASSIST ကိုသုံးပြီး တိုင်ချက်အသစ်တိုင်တန်းခြင်း သို့မဟုတ် ၆.၁ တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် အကြပ်အတည်းဖြေရှင်းသည့် ယန္တရားများကို အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့ အခြား နည်းလမ်းရွေးချယ်စရာများကို ရှာခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
မရနိုင်ပါ။ ASSIST သည် အချုပ်အနှောင်ကင်းပြီး ဆန္ဒအလျောက်ဆောင်ရွက်ထားသည့် ယန္တရားဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အား တိုင်တန်းသူမှ အယူခံဝင်နိုင်သော ဥပဒေရေးရာလုပ်ဆောင်ချက်မျိုးနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
ရပါသည်။ နည်းစနစ်အရ ရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အချိန်နှင့် ရင်းမြစ်များ အလဟဿဖြစ်၍ အကျိုးမရှိဖြစ်ဖို့သာ များပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ တိုင်တန်းသူမှ ယင်းသို့လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါက တိုင်တန်းချက်တွင် သွားမည့် နိုင်ငံမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်မည့် ထပ်တိုးခိုင်မာသည့် အထောက်အထားများ သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ လျှောက်လဲချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး တိုင်ချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ပေးရန် အလေးအနက်ထား တိုက်တွန်းပါသည်။